नयाँ भेरियन्ट’ ओमिक्रोनमा खोपले काम गर्छ कि गर्दैन? || स्वास्थ्य
नयाँ भेरियन्ट’ ओमिक्रोनमा खोपले काम गर्छ...
नयाँ भेरियन्ट’ ओमिक्रोनमा खोपले काम गर्छ कि गर्दैन?
काठमाडौँ / नोभेम्बर २४ मा दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रान’ पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भेरियन्टलाई ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ घोषणा गरेको छ। संगठनले यो भेरियन्ट तीव्र रूपमा फैलिने र ठूलो संख्यामा उत्परिवर्तित हुने भएका कारण उच्च सतर्क रहनुपर्ने जनाएको छ।
नयाँ भेरियन्ट देखा परेसँगै कैयौँ देशले दक्षिण अफ्रिका जाने–आउने क्रमलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने कतिले यसलाई सीमित गरेका छन्।
दक्षिण अफ्रिकासँगै यो भेरियन्ट बोत्सवाना, बेल्जियम, हङकङ र इजरायलमा पनि पुष्टि भइसकेको छ। दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, बोत्स्वाना, लेसेथो अनि इस्वाटीटीबाट आउने यात्रुमा उनीहरू युके वा आयरल्यान्डका नागरिक वा युकेका बासिन्दा रहेको अवस्थाबाहेक अन्यलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
यस्तै बेलायत, अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशले संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै दक्षिण अफ्रिका जान–आउन प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्।
युरोपेली संघअन्तर्गतका राष्ट्र र स्विट्जरल्यान्डले पनि अस्थायी रूपमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँगको हवाई यात्रामा रोक लगाएका छन्।
शुक्रबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरुमा नयाँ भेरियन्टका कारण दक्षिण अफ्रिकाका सबैजसो राज्यमा संक्रमण बढिरहेको पाइएको जनाए पनि वैज्ञानिकहरूले यो भेरियन्ट कत्तिको संक्रामक छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै नयाँ भेरियन्टको प्रभाव बुझ्न केही साता लाग्नेसमेत जनाएको छ।
भारतले हङकङ, बोत्सवाना र इजरायलबाट आउने सबै यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विमानस्थललाई निर्देशन दिइसकेको छ।
अफ्रिका हुँदै विभिन्न मुलुकमा देखा पर्न थालेको ‘ओमिक्रान’ भारतमा पनि देखिएपछि यसको जोखिम नेपालमा अझ बढी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
यो भाइरस नयाँ भएका कारण अझै त्यति धेरै जानकारी नभएको डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन्।
उनले भने, ‘खोपले कति काम गर्ने–नगर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छैन। यसबारे अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिले नै सबै कुरा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्न सकिँदैन।’
डा. पुनका अनुसार भेरियन्टमा धेरै न्युटेन देखिएको छ। यसमा पनि स्पाइक प्रोटिन देखियो। जसले गर्दा दक्षिण अफ्रिकामा संक्रमण फैलिन सक्ने क्षमता बढी देखिएको भनिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भेरियन्ट नेपाल भित्रिने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
नेपालमा नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भइनसके पनि त्यसलाई सम्भावनामै राखेर काम अगाडि बढाइरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए।
संगठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै देशले सर्भेलेन्स, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सामाजिक दूरीका साथै खोप कार्यक्रमलाई बढावा दिन आग्रह गरेको छ।
सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील...
थप २८ जनामा ओमिक्रोन भेरियण्टको संक्रमण पुष्टि
एक साताका लागि खोप अभियान स्थगित